महङ्गो भयो निर्वाचन : लाखौ खर्च गर्न सक्ने मात्र उम्मेदवार बन्न सक्ने !
निर्वाचन कसरी जितिन्छ ?
पैसाको बलमा वा एजेन्डाको लोकप्रियताले ? यतिबेला मात्र होइन, प्रायः सधैँ निर्वाचनका बेलामा उठ्ने प्रश्न वा सुरु हुने बहस हो यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका वेला अहिले आम नेपालीले पनि यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।